Tanjon’ity mpanakanto ity, araka izany, ny hanandratra avo ny maha-Malagasy amin’ny alalan’ny tononkira sy tononkalo voajary avy amin’ny alalan’ny fampiasana ny voambolana malagasy. Ireo rehetra ireo voaravaky ny mozika tsara rafitra sy voarindra amin’ny endrika kanto.
Misandrahaka amin’ny lohahevitra maroloko toy ny fitiavana, ny fiainana andavan’andro, sns ny tononkirako, hoy i Hasina Ratera. Saingy ironako kokoa ankehitriny ny fanomezam-boninahitra sy fiderana an’ilay Ray nahary ny tany sy ny lanitra ary ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly ho an’ny Malagasy tsy ankanavaka.
Ampahany amin’ireo taokanto efa maro mpankafy novokarin’i Hasina Ratera ilay sanganasa misalotra ny lohateny hoe : “Tononkalo”. Ity farany izay manasongadina ny fahaiza-manaon’ity mpanakanto ity amin’ny fampiarahana ny mozika sy ny tononkalo hanjary taokanto mambabo fo sy fanahy ary sahaza ny isan-tokonana.